STRAWBERRY "MARSHAL": SHARAXAADDA KALA DUWANAANTA IYO BEERISTA AGROTECHNOLOGY - STRAWBERRIES
Marshal Characteristic "Marshal": beerashada iyo daryeelka
Strawberry "Marshal" waa mid ka mid ah noocyada leh miraha waaweyn.
Bannaanka u badani waxay door bidaan noocyada noocyada kala duwan ee loogu talagalay taranta, maaddaama ay suuragal tahay in la soo ururiyo wax badan oo ka badan hal diga ah intii ay ku ciyaari lahaayeen miro yar yar on geedo dhowr ah.
Taariikhda noocyada strawberries taranta noocyada "Marshal"
Kala duwanaansho "Marshal" - Natiijada hawsha mareegta Marshall Huella ee Maraykanka. Cilmi-baaristu waxay keentay strawberries ku habboon beerashada waqooyi-bari Massachusetts, oo uu ka shaqeeyey. Strawberry "Marshal" waxaa loo soo bandhigay dadweynaha sannadkii 1890, waxaana si deg-deg ah u helay noocyo jiilaal-adag, oo leh wax-qabad wanaagsan.
Dhammaadkii Dagaalkii Labaad ee Adduunka, strawberries waxay qabsadeen suuqyada Yurub iyo Japan.
Tilmaanta "Marshal" kala duwan
Strawberry Marshall waxay leedahay duur joog ah oo qoryo leh. Taarfiiqyada caleenta - cagaaran, cagaar cirif ah, caws iyo xoog leh. Kala duwanaanshuhu waa mid gaar ah marka la eego qaabaynta isbeddelka xaaladaha sii kordhaya, jiilaalka-adag iyo u diiriya si wanaagsan. Waa waqti dhexdhexaad ah, midho dhaadheer muddo dheer oo waa mid miro dhal ah.
Midhaha casaanka leh ee buluugta leh ee dusha sare leh waxay leeyihiin dhadhan macaan iyo caraf udgoon. Strawberry "Marshal" wuxuu leeyahay huurid gudaha ah, saxaradiisu waa casiir leh, wax yar oo dabacsan, ballaaran ee berry waa ilaa 90 garaam.
Sababtoo ah cufnaanta celceliska miraha, kala duwanaantu ma aha mid la qaadi karo, waa in si taxadar leh u ahaato inta lagu jiro gaadiidka. Fruiting ugu badnaan waa la arkay sanadka ugu horeeya ee nolosha geedka, ka dibna dhalidda wax yar dhibic, laakiin ma dareemin.
Strawberry "Marshal" ee sharaxaadda noocyada kala duwan ayaa loo aqoonsan yahay sida berry oo dhan: sidoo kale waa wax fiican oo ku haboon isticmaalka cusub, ilaalinta kala duwan, qaboojinta iyo kuleylka daaweynta macmacaanka.
Ma taqaanaa? Berry kaliya ee dabiiciga, miraha taas oo ku yaal banaanka - tani waa strawberries. In dunida botanical, miraha kuwan waxaa loo yaqaan nuts, siday u kala horreeyaan, strawberries --meelo badan
Doorashada meel loo beerayo strawberries
Wixii strawberries Marshall, waa inaad doorataa meelaha ay si fiican u iftiimayaan qorraxda, iyo dhulka waa in si fiican u jilicsan, aerated. Carrabku waa ka fiican yahay inuu doorto nafaqo leh qoyaan fiican oo qoyaan leh. Heerka biyaha hoose waa inaanay ka badnaan 1 m.
Waa muhiim! Laguma talinayo in lagu beero strawberries on dhinacyada ee dhinaca koonfureed ee goobtii, halkaas oo barafka u dhalaaliyo si dhakhso ah, soo bandhigay geedka iyo ku cambaareeyeen si ay u qaboojiso.
Ka hor inta beeritaanka strawberries, waxaa lagama maarmaan ah si loo diyaariyo goobtii iyo geedo, taas oo looga baahan yahay horumarinta wanaagsan ee dalagga, ilaalinta ka soo cudurada iyo, natiijo ahaan, goosashada wanaagsan.
Ka hor inta nidaamka laga beerto, qodida ciidda qoto dheer waxaa lagu fuliyaa aagga la doortay. Iyadoo ku xiran halabuurka ciidda samee xaddiga saxda ah ee humus iyo ciid. Tusaale ahaan, carrada peat, 6 kg ee humus iyo 10 kg oo ciid ah 1 m² ayaa loo baahan yahay. On carrada dhoobo - 10 kg ee humus, 12 kg oo ciid ah iyo 5 kg oo balka dhoobada.
Diyaarinta geedo waa la yareeyey si loo nadiifiyo nidaamka xididka. Xididdada warshad dhalinyaro ah ayaa lagu qallajiyaa xal milan ah oo ah kiniiniga dhalada ah (casaan iftiin leh) shan ilaa toddoba daqiiqo, kadibna biyo nadiif ah ku dhaq.
Geedo geedo strawberry ah "Marshal"
Wixii strawberries Marshall, guga hore waa waqtiga ugu fiican ee beerto. Marka la beero xilliga dayrta, dhalidda ayaa si weyn u dhici karta. Haddii, si kastaba ha ahaatee, nidaamku wuxuu dhacay xilligii dayrta, ka dibna waa in la beeraa ugu dambeyn afar iyo toban maalmood ka hor bilowga bilawga ah ee dhaxan.
Marka beeritaanka, la siiyo awoodda ay duurka si ay u koraan si xoog leh, iyaga waxaa lagu beeray qaab habaysan, oo ka tagaya masaafada ugu yaraan 25 cm. Mustaqbalka, duurka qaangaarka ah ma faragelin doono midba midka kale, nidaamyada xididkoodana si xor ah ayaa loo qaybin doonaa.
Tiknoolojiga beeraha ee strawberries sii kordhaya "Marshal"
Daryeelka strawberries "Marshal" wuxuu bilaabmaa ka hor intaan la beeriin, gaar ahaan, iyo xulashada kuwa horey u soo horjeeda. Kuwani waa: karootada, basasha, toon, dhir iyo dill. Strawberry si fiican u koraa kadib isbinaajka, digirta, radishes iyo celery.
Ma aha mid fruiting xun ka dib dhirta ubax: tulips, marigolds, daffodils. Haddii dhulku yahay mid liita, waa in la beeraa dhaqanka meel ka mid ah shirkadda of mustard iyo phacelia.
Waa muhiim! Ma abuuri kartid strawberries ka dib markii yaanyada, eggplants, basbaas (macaan), baradhada iyo qajaarka.
Strawberry "Marshal" wuxuu u adkeysanaya cudurrada, laakiin ilaalinta dalagga dalaggu wuxuu taageeri doonaa difaaca dhirta wuxuuna u oggolaanayaa inuu si firfircoon u horumariyo oo midho u dhasho.
Waraabinta iyo dabacsanaanta ciidda
Strawberries waxay u baahan tahay waraabinta laga bilaabo maalmaha ugu horreeya ee May, taas oo ah, inta lagu jiro koritaan firfircoon. Waraabinta waa lagama maarmaan si joogto ah illaa goosashada. Nidaamkan waxaa la sameeyaa subaxda ama fiidka, sidaas daraadeed dhibcaha qoyaanka caleenta, uumi baxa qorraxda firfircoon, ha gubin unugyada dhirta.
Dhulka ku wareegsan duurka waa in si joogto ah u dabacsan, sida xididada u baahan yihiin ogsijiin iyo qoyaan. On cufan cufan, ciidda ruxan, fruiting noqon doonaa wax yar ama ma at dhan.
Marka ay tahay wakhtiga bacriminta strawberries, waxaa fiican in la isticmaalo Bacriminta organic, tan iyo dalagga this aad u jilicsan oo, aan la qiyaasin qiyaasta ah ee macdanta macdanta, geedka waxaa lagu gubi karaa.
Bacrimiya iyada oo leh qalabka dabiiciga ah sida slurry, faleebo digada digaag, faleebo of haramaha, nettle, ash alwaax. Cagaarshow waa in la quudiyo inta lagu jiro koritaanka, ubaxa iyo samaynta miro.
Ma taqaanaa? Magaalada Nemi (Talyaaniga) waxaa la qabanqaabiyaa xaflad loogu talagalay strawberries sannad kasta. Foorno weyn oo ah qaabka baaqul wuxuu ka buuxsamaa strawberries iyo shubagne shubay. Dhammaan martida fasaxyada iyo dadka la soo dhaafay ayaa isku dayi kara daaweyntan.
Isku ururinta strawberries
Strawberry "Marshal" waxaa had iyo jeer lagu kala soocay dhalidiisa. Laga soo bilaabo hal barkiis sida caadiga ah waxay soo ururiyaan ilaa hal iyo badh kilograms of berry. Waxay u bislaadaan horraantii Juun. Waxa xusid mudan in ciriiri leh jawi khafiif ah oo diiran, laba iyo saddex dalag ayaa la goyn karaa.
The nooca kala duwan ee this yihiin kuwo waaweyn iyo dhadhan leh midab casaan leh oo casaan ah ee saxarka, iyada oo aan voids. Waa suurad wacan in la soo ururiyo miraha dalagga qallalan gelinka dambe. Berry qoyan lama kaydin doono, subaxdii waxaa badanaa dhoobo ah ee berry ah. Midhaha Marshal waa cufnaanta celcelis ahaan, marka marka gaadiidka la qaado waxaa haboon in la daryeelo "raaxada" ee dalagga la goostay.
Strawberry waa miro qorrax leh oo caafimaad leh, xajin leh nooc ka mid ah miro yar oo casaan dhalaalaya. Waa faa'iido cusub, casiirkiisu waa mid dhadhan fiican leh, marka la barafeeyey, strawberries ku hayaan dhammaan guryaha, iyo berry waa la ilaalin karaa, la qalajiyey ama loo kaydiyey sida miraha candiedi.